Nyanzvi Munyaya dzeHutano Dzokurudzira Kuti Vanhu Vamanikidzwe Kugara Mudzimba Dzavo
Ecocash 2 Zimbabwe Cash Crunch
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzinoti kumanikidza vanhu kuzvivharira mudzimba ndizvo chete zvinogona kubatsira nyika kudzivirira kuti chirwere cheCoronavirus chisapararire.
Mukuru anoona nezvehutano mukanzuru yeHarare, Dr Prosper Chonzi, vanoti kugara mudzimba ndiyo nzira chete ingaite kuti nyika ikunde kurwisa chirwere cheCoronavirus.
VaChonzi vanoti sezvo vanhu vari kuramba vachienda kumabasa vachisangana, hurumende ndiyo yega ine simba rekuona kuti chirwere ichi hachiparariri kuburikidza nekutora matanho anoita kuti vanhu vasabude mudzimba dzavo.
VaChonzi vanoti izvi zvikasaitwa nechimbichimbi, nyika inogona kutozotadza kugadzirisa dambudziko rechirwere ichi icho vati chinotapukiriranwa nekukasika.
VaChonzi vanotiwo kanzuru yave mushishi kugadzirisa zvipatara zvayo zvese kuitira kuti zvive nemipanda inokwanisa kuzochengeterwa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi sezvo vari kuona kuti kana Coronavirus ikatekeshera munyika, nzvimbo dzakagadzirirwa nehurumende sechipatara chavo cheWilkins, hadzigoni kuzobatsira vese vanenge vabatwa nedambudziko iri.
VaChonzi vanotiwo pari zvino chipatara cheWilkins chiri kuvandudzwa izvo zviri kupa kuti vafanoshandisa chipatara cheBeatrice Infectious hospital.
VaChonzi vatiwo kune mishonga inogadzirwa mudzimba kurwisa zvirwere zvakaita sechedzihwa nekukosora yakaita sekunwa malemon, kudya huchi nezvimwe zvakadaro vakati kana munhu abatwa neCoronavirus anogona kutora mishonga iyi asi zvakakosha kuti munhu uyu asasangane neruzhinji.
Munyori wezvehutano mubato reMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, Dr Henry Madzorera, avo vaimbove gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti nzvimbo dziripo pari zvino ishoma zvikuru kana pachitariswa zviri kuitika kune dzimwe nyika dzarohwa zvakanyanya nechirwere ichi.
VaMadzorera vanotiwo vachitarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika vamwe vanhu vanobatwa nechirwere ichi vanogona kupora vasina kupinda muchipatara.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health, VaItai Rusike, vanoti itarisiro yavo kuti dunhu rega rega rive nenzvimbo inokwanisa kubatsirwa vanhu vanenge vabatwa neCoronavirus.
Chirwere ichi chakatanga kuChina muna Zvita gore rapera, uye chabata vanhu vanodarika mazana mashanu nemakumi matatu ezviuru, vashanu vari vemuZimbabwe, uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose, mumwe chete, Zororo Makamba, ari wemuZimbabwe.
NeChishanu America yavimbisa kubatsira Zimbabwe kurwisa Coronavirus nemari inoita mazana mana nemakumi manomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica.
Kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980, America yabatsira Zimbabwe munyaya dzehutano nemari inosvika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica.